Umthengisi Wezithuthuthu zeHonda nosizo Olusemthethweni eMessina
Isikhungo seHonda Service kanye nezingxenye eziningi zemikhiqizo yezithuthuthu zakho.
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-34)
I-Motostore yinkampani yomlando emkhakheni ukuhamba ngezithuthuthu, Ukuthengisa izithuthuthu e Usizo Olusemthethweni lweHonda edolobheni Messina. Isikhungo esizinikezelwe abashayeli bezithuthuthu e amasenti ngakho konke okudingayo ngabo ngesithuthuthu: Usizo, Izakhi Zangempela ze-Honda kanye nama-Multibrands, izesekeli, Izingxenye ezikhethekile ngamanani abiza kakhulu.
I-Honda Dealership kanye neWebhusayithi Esemthethweni: I-MotoStore ingumbuso wama-Centaurs eMessina
Izingxenye ezingasebenzi, izesekeli, iwaranti esemthethweni, amakhuphoni. Isikhungo esikhethekile sakwaHonda a Messina lapho uzothola khona un 'Amaprosesa asekelwe engakaze ibonwe eyakho ngesithuthuthu. Futhi ukuhamba ngesithuthuthu zombili edolobheni nangaphandle. Noma ngubani ofuna i- Isikhungo Esikhethekile kungcono 'Umsebenzi osemthethweni waseHonda eMessina, uyakwazi lokho I-Motostore yisikhungo esifanele kunazo zonke edolobheni. Ngenxa yomdlandla nesipiliyoni seqembu lesikhungo, ngamunye i-centaur noma isishisekeli sezithuthuthu ekugcineni sizoba nensiza ephelele ye-360 degree yokuzinakekela Isithuthuthu. Lokhu kudumile Ukuthengiswa kweHonda ubelokhu enikeza usizo lobuchwepheshe kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-70s. Kusukela ngo-2000 iba Izitolo eziningi e Isikhungo Sesevisi Esemthethweni saseHonda.
Usizo Olusemthethweni lwe-Honda kanye neWorkshop ekhethekile: i-Dealership enikezela ukungenelela ngesikhathi
Yiba kusukela ngonyaka ka-2014 Umthengisi womenzeli oyedwa yomkhiqizo IHonda Moto, isikhungo sinakekela konke okudingayo ukuze uzinakekele ngesithuthuthu. Ukusekela, Izingxenye ze-Honda Genuine nama-Multibrands, Izesekeli kanye Nezingxenye Ezikhethekile lapha onazo ukuze unikeze ezakho ngesithuthuthu konke ukunakwa okufanele. Konke ngamanani angenakuqhathaniswa edolobheni. Ngaphezu kwendatshana yomkhiqizo onomlando Honda, isikhungo esiziqhenyayo ngalo Indawo yokusebenzela yosizo oluGunyaziwe, lo Ukuthengisa izinto ngenkani ibuye iphathe eminye imikhiqizo, kufaka phakathi: uNolan, Givi, Tucano Urbano, Grex kanye neXLite.
Izingubo ezisemthethweni zohlobo lwe-Centaurs ezingafuni ukuhamba zinganakwa
Ngaphezu kokuningi izingxenye ezisele, izesekeli nezingxenye zakho amasondo amabili, isikhungo kubikwa kuso Messina kanye nokunqunywa okubanzi kwe Izingubo zama-centaurs. Ukukhetha okukhulu kwe nezigqoko nezesekeli zabesilisa nabesifazane, zinikezwa at Ukuthengisa izinto ngenkani ngayinye abashayeli bezithuthuthu e abashayeli bezithuthuthu abafuna ukukhombisa okungcono kakhulu uma bezishayela Honda.
Ukushayela isithuthuthu sakho kujabulise ngisho nangokwengeziwe ngezesekeli ezifanele
Iqembu le Ukuthengiswa kweHonda Isitolo Somlilo isiveze iminyaka eminingi edolobheni ngobuchule bayo nokuzinikela kwabo emhlabeni Amasondo amabili. Eqinisweni bangabalandeli bokuqala baka ngesithuthuthu futhi ngenxa yalesi sizathu ngiyakwazi ukukunikeza usizo olusheshayo nolusebenzayo. Isikhungo se Usizo Olusemthethweni lweHonda animated ochwepheshe abakhethekile nabaqeqeshiwe wafunga ukuthi uzogcina eyakho ngesithuthuthu isesimweni esisebenza ngaso sonke isikhathi. Ungaxhumana nabo ukuze uthole izeluleko noma uma kwenzeka kwenzeka ukwehluleka noma ukulungiswa okungalungiswa. Ukuthi unayo ngesithuthuthu noma eyodwa isithuthuthu, Lapha uzohlala uthola izinga elifanayo lokunakwa nezinsizakalo ezisezingeni.
Ikheli: I-Via Maddalena, i-118 (iphoyinti lokuthengisa)
Isihlalo 2: Via Ghibellina, 105 (Usizo)
Ucingo: 090 674522
Umakhala ekhukhwini: 340 6739650
Inombolo ye-VAT: 02098540830